बिहानै मर्स्याङ्दीमा मिनी ट्रक खस्यो, चुर्लुम्मै डुब्यो ट्रक! – PathivaraOnline
Home > समाचार > बिहानै मर्स्याङ्दीमा मिनी ट्रक खस्यो, चुर्लुम्मै डुब्यो ट्रक!
सविन लामिछाने । तनहुँ, १७ भदौ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका– २ मा पर्ने ऐना पहरा नजिकबाट आज बिहान मर्स्याङ्दी नदीमा मिनी ट्रक खसेको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँका प्रमुख रेशम बहादुर रानाभाटका अनुसार घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा सवारीसाधन खसेको जस्तो देखिएकाे छ ।
मुग्लिनबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेका यात्रुहरुले खबर गरेपछि घटनास्थल हेर्दा कुनै सवारी साधन नदीमा खसेको देखिएको उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, “नदीको सबैभन्दा गहिरो भाग रहेकाले कुन सवारी साधन हो, देखिएको छैन । गोताखोर मगाएका छौँ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले सडकको डिभाइडर भाँचेर कुनै सवारी साधन नदीमा खसेको जस्तो देखिएको बताउनुभयाे । घटनास्थलमा गएका पौडेलले भन्नुभयाे, “प्रमुख जिल्ला अधिकारी र म पनि अहिले घटनास्थलमा छु ।
सवारी साधन यो भन्ने देखिएको छैन, सिसिटिभी फुटेजमा बिहानको दृश्य हेर्दा पोखराबाट आउँदै गरेको मिनी ट्रक बाटोमा देखिएकाले त्यही हो कि भन्ने अनुमान छ, यकिन भइसकेको छैन ।”
बिहानै दाङकाे लमहीबाट अायो दुर्घटनाकाे यस्तो दुःखद खबर
भर्खरै चितवनबाट आयो अत्यन्तै दुखद घटनाको खबर
रेल लिकबाहिर गएपछि भयो यस्तो भयानक दुर्घटना -मर्नेको संख्या ३० पुग्यो